Mateo Asɛmpa No 11:1-30
Ɔkamfoo Yohane Suboni (1-15)
Ɔkaa awo ntoatoaso asoɔdenfo no anim (16-24)
Yesu yii n’Agya ayɛ sɛ wadom ahobrɛasefo (25-27)
Yesu kɔndua ma yenya ɔhome (28-30)
11 Bere a Yesu maa n’asuafo 12 no akwankyerɛ wiei no, ofii hɔ sɛ ɔrekɔkyerɛkyerɛ na waka asɛm no wɔ wɔn nkurow no mu.+ 2 Na bere a Yohane da afiase+ a ɔtee nnwuma a Kristo reyɛ no, ɔsomaa n’asuafo+ 3 kobisaa no sɛ: “Wone Nea Ɔreba no, anaasɛ yɛnhwɛ obi foforo kwan?”+ 4 Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ na monkɔka nea mote na muhu no nkyerɛ Yohane sɛ:+ 5 Seesei anifuraefo hu ade,+ mmubuafo nantew, akwatafo+ nya ayaresa,* wɔn a wɔn aso asiw te asɛm, wonyan awufo, na wɔka asɛmpa no+ kyerɛ ahiafo. 6 Anigye ne obiara a mentoo no hintidua.”+ 7 Bere a eyinom nam kwan so rekɔ no, Yesu fii ase kaa Yohane ho asɛm kyerɛɛ nnipadɔm no sɛ: “Dɛn na mokɔɔ sare so kɔhwɛe?+ Demmire* a mframa rewosow no anaa?+ 8 Ɛnde, dɛn na mupue kɔhwɛe? Ɔbarima a ɔhyɛ ataade pa* anaa? Hwɛ, wɔn a wɔhyɛ ntaade pa no, wɔte ahemfi. 9 Dɛn nti koraa na mupuei? Mokɔhwɛɛ odiyifo anaa? Yiw, ɔyɛ odiyifo, na ɔsen odiyifo mpo.+ 10 Oyi ne nea wɔakyerɛw ne ho asɛm sɛ: ‘Hwɛ! meresoma me somafo adi w’anim, na ɔno na obesiesie kwan mu ama wo!’+ 11 Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, wɔn a mmea awo wɔn nyinaa mu no, obiara mmae a ɔyɛ kɛse sen Yohane Suboni; nanso nea osua wɔ ɔsoro Ahenni mu no yɛ kɛse sen no.+ 12 Efi Yohane Suboni bere so besi nnɛ no, ɔsoro Ahenni no ne botae a nnipa repere adu ho, na wɔn a wɔyere wɔn ho denneennen no nsa ka.+ 13 Efisɛ Adiyifo no ne Mmara no nyinaa hyɛɛ nkɔm besii Yohane so.+ 14 Na sɛ mubegye atom a, ɔno ne ‘Elia a ɔreba no.’+ 15 Ma nea ɔwɔ aso no ntie. 16 “Hena na mede awo ntoatoaso yi bɛtoto ne ho?+ Ɛte sɛ mmofra nkumaa a wɔtete gua so a wɔreteɛm frɛ wɔn mfɛfo 17 sɛ: ‘Yɛde atɛntɛbɛn bɔɔ nnwom maa mo, nanso moansaw; yesui na yɛteɛteɛɛm, nanso moanni awerɛhow.’* 18 Saa ara nso na Yohane bae no, wannidi na wannom, na nkurɔfo se, ‘Ɔwɔ honhommɔne.’ 19 Onipa Ba no aba; odidi na ɔnom,+ nanso nkurɔfo ka sɛ, ‘Hwɛ! Ɔbarima didifo* ne kɔwensani, wɔn a wogyigye tow ne nnebɔneyɛfo adamfo.’+ Nanso, nyansa nam ne nnwuma so* di bem.”*+ 20 Afei ofii ase kaa nkurow a ɔyɛɛ n’anwonwade dodow no ara wom no anim, efisɛ wɔansakra: 21 “Korasin, due! Betsaida, due! Efisɛ anwonwade a ɛkɔɔ so wɔ mo mu no, sɛ ɛkɔɔ so wɔ Tiro ne Sidon a, anka wɔasakra afurafura awerɛhow ntama* atenatena nsõ mu+ dedaadaw. 22 Enti mereka akyerɛ mo sɛ, nea ɛbɛto mo Atemmu Da no, ɛbɛkyɛn Tiro ne Sidon.+ 23 Na wo Kapernaum,+ wɔbɛma wo so akɔ soro anaa? Ɔdamoa* mu na wubesian akɔ;+ efisɛ anwonwade a wɔyɛe wɔ wo mu no, sɛ wɔyɛe wɔ Sodom a, anka ɛwɔ hɔ de besi nnɛ da yi. 24 Enti mereka akyerɛ mo sɛ, nea ɛbɛto wo Atemmu Da no, ɛbɛkyɛn Sodom asaase no.”+ 25 Saa bere no, Yesu kae sɛ: “Agya, ɔsoro ne asaase Wura, miyi wo ayɛ wɔ baguam, efisɛ wode eyinom asie anyansafo ne animdefo, na woayi no adi akyerɛ mmofra nkumaa.+ 26 O Agya, ɛyɛ ampa, efisɛ eyi ne ɔkwan a ɛsɔ w’ani. 27 M’Agya de nneɛma nyinaa ahyɛ me nsa,+ na obiara nnim Ɔba no yiye gye Agya no,+ na saa ara nso na obiara nnim Agya no yiye gye Ɔba no, ne nea Ɔba no pɛ sɛ ɔda Agya no adi kyerɛ no no.+ 28 Mo a moabrɛ na wɔde nnesoa asoa mo nyinaa, mommra me nkyɛn, na mɛma mo ho adwo mo. 29 Momfa me kɔndua nto mo ho so na munsua me, efisɛ midwo, na mebrɛ me ho ase koma mu,+ na mubenya ɔhome.* 30 Efisɛ me kɔndua soa nyɛ den na m’adesoa yɛ hare.”
^ Anaa “moamfa mo nsa ammobɔ mo koko anni awerɛhow.”
^ Anaa “nyansa nam nea efi mu ba so.”
^ Anaa “mubenya ɔhome ama mo kra.”